SIDEE LOO QURXIYAA XAFIISKA SANADKA CUSUB. NAQSHADDA ASAASIGA AH EE DUGSIGA, CAAFIMAADKA, XAFIISYADA IYO DHISMAYAASHA GANACSIGA AYAA ADIGA KUU SAMEYNAYA JUL - SAMEE NAFTAADA
Waxay u dhowdahay dabaaldegga Sanadka Cusub, inta badan dhammaan noocyada calaamadaha, garlands cad iyo qurxinta kala duwan ayaa laga heli karaa waddooyinka.
Sawirkan kahor-jimcaha ah ma aha laakiin wuxuu dhiirigelinayaa qurxinta goobta shaqadooda. Waxaa intaa dheer, waa wax aad ufiican in la shaqeeyo halka aan jawiga rasmiga aheyn oo kaliya, laakiin waxaa jira sidoo kale yar, laakiin fasaxa noocan oo kale ah xusuusta xafladaha soo socda.
Qodobkan waxaan eegeynaa sida aad u qurxin kartid goobta shaqada ama xafiiska, si qayb ka mid ah fasaxu kula joogi doono xataa saacadaha shaqada.
Ka hor inta aadan u soo gudbineynin qurxinta qurxinta qolka, waxaad u baahan tahay inaad go'aansato qorshaha midabka, kaas oo aad u sharaxdo jawiga la yaqaan. Dhammaanteen waxaan dooneynaa in xafiisku uu arko wax aan caadi ahayn, laakiin ma dhaafo waxa macquul ah.
Midabada caadiga ah ee la xidhiidha Sannadka Cusub waa casaan, cagaar, dahab, caddaan. Waxaan soo jeedineynaa inaanu u fiirsanno xayawaanada kale ee loogu yeero sannadka soo socda iyo, shaki la'aan, wuxuu ku soo jiidan doonaa farxad iyo nolol wanaagsan noloshaada.
Waa muhiim! Waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho hooska caadiga ah ee cadeynta si aad u qurxiso xafiiska. Sida ugu muhiimsan, waxaa fiican inaad qaadato midabada midabka leh, oo leh muraayado iftiin leh waxay u fiicnaan doontaa in la gooyo gudaha gudaha.
Hooska ugu weyn ee 2018 waa mid huruud ah. Midabada kale, midabada wanaagsan ayaa ah buluug, brown, cagaar iyo guduud, sidaa daraadeed maahan lagama maarmaan si aad u bixiso midka cusub ee New Years, waa ku filan oo kaliya in ay ku dhejiyaan iyaga oo isdhaafsanaya. I rumaysta, qurxinta xafladu waxay si fudud u samayn kartaa iyada oo aan la taaban waxyaabo badan oo cajiib ah, mid kaliya ayaa noqon doona mid ku filan.
Khiyaar kale oo kaa caawin doona ma aha oo kaliya inuu ku qurxiyo goobta shaqada, laakiin sidoo kale wuxuu xoojinayaa shakhsiga shirkadda, kuwani waa, dabcan, midabada calaamadda shirkadda. Qurxinta isku midka ah ee calaamadda ayaa si fiican u soo jiidi karta macaamiisha, xafiiskuna wuxuu u eegi doonaa labadaba isla mar ahaantaana xaflad.
Waa mid gabi ahaanba dooran karta in lagu rakibo geed ama geedka jasiiradda ee rasmiga ah ee xafiisyada, oo ma aha in qof kasta oo ra'iisal ahi ku faraxsan yahay inuu arko walxahaas oo kale oo ka mid ah gudaha fasaxa kahor. Waxaan ogaan doonaa waxyaabaha ay tahay in aan korsan karno, si aaney u qurxin laheyn goobta shaqadu aanay noqon mid qaali ah, laakiin waqti isku mid ah waxay u muuqan doontaa mid cajiib ah oo aan caadi ahayn.
Waxaan kugula talineynaa inaad aqriso sida loo qaabeeyo guryaha sanadka Cusub.
Laamaha geedka iyo geedka
Dukaamada maanta waxaad ka heli kartaa kala duwanaansho badan oo isbarbardhigaya qurxinta quruxda leh - isafgarad iyo midab leh. Noocyada qurxinta noocaan oo kale ah waa mid ballaaran, si aad si fudud u dooran karto geedka kirismaska ​​ee qaabka la doonayo, cabbirka iyo midabka.
Qalabka kaliya ee alaabooyinkaasi waa ur la'aanta, sababtoo ah dhirta oo dhan waxay ka sameysan yihiin qalab macmal ah. Kuwa jecel in ay ku wareegaan aroosyada qurxoon, waxaan ku wargelineynaa in fasaxii sannadka cusubi sidoo kale uu leeyahay mid u gaar ah, urta gaarka ah. Si aad u dareento, kaliya ka neefso urta digaaga, mashiinka iyo shukulaatada.
Ma taqaanaa? Ruushka, dhaqanka qurxinta geedka kirismaska ​​wuxuu uugu mahadceliyay Peter The Great. Boqortooyada ugu horreysa waxay amar ku bixisay in la gooyo foorno, geedo iyo juniper ah in lagu rakibo barxadaha, si ay u toogtaan fasaxa ciidda yar iyo qoryaha yaryar, si ay u leexiyaan laydhka iyo gantaalaha. Dadka ugu saboolsan ayaa la siiyay geedo iyo geedo lacag la'aan ah.
Haddii aad runtii rabto in aad kala soocdo xafiiska gudaha ee warshadda nool, waxay noqon doontaa mid ku filan inaad qaadato dhirta yaryar ee dhirta iyo qurxin haddii aad rabto. Waxba kama badin doonaan goobta shaqada, laguma mashquulin doono dhibaatooyinka fasaxa. Waxaa sidoo kale jira ikhtiyaar sida noocan oo kale ah sida bouquets ee dhirta dhirta. Waxay u fiican yihiin kuwa jecel minimalism, sababtoo ah bawluhu waxay si fudud ugu habboon yihiin muraayad, waxaadna dooran kartaa naqshadeynta qaabka ubaxa ugu caansan ee ku saleysan dhadhankaaga.
Dhir dhaqameedka waxaa lagu bedeli karaa dhirta dhaadheer sida araucaria, boxwood, qolka qoryaha, juniper iyo thuja.
Qurxinta noocan oo kale ah way ogyihiin dhammaanteen tan iyo carruurnimada. Dhamaan noocyada qashinka guryaha ee warqadda midabada leh, dhamaanba dhammaan waxyaabaha aad jeceshahay. Si kastaba ha ahaatee, ha ku degdegin inaad qaadato soo saarista qurxintaas.
Ka dib oo dhan, jeer ayaa isbedela, iyo haddii aad rabto inaad bedesho gudaha gudaha goobta isbeddel casri ah, waa inaad raadisaa noocyo cusub oo waraaqo ah. Iyo wax badan oo iyaga ka mid ah: laga bilaabo barafka hareeraha, ubax cad oo dhalaalaya, mishiinnada caleemaha iyo kubbada dhajinta ee tirakoobka ama tirigami, taas oo si madaxbanaan loo samayn karo.
Marka lagu daro tiro badan oo dahab ah, waxaad ka dhigi kartaa garland adiga oo ku caawinaya nambarada iyo waraaqaha waraaqaha. Qalab cusub oo qurxin leh ayaa ah meeleynta abaaraha iyo taageerayaasha kuwaas oo u eegi doona asalka xafiiskaaga. Ha iloobin astaamaha caanka ah ee fasaxyada - balloonada. Suuqa casriga ah waxay bixiyaan noocyo kala duwan oo kubado ah - laga bilaabo qurxinta caadiga ah ama jilbaha si dahab dhalaalaya ama lacag ah. Fursadaha - badanaa, iyo dhammaantoodba, ugu yaraan, waxay ku baxaan qiimaha.
Cimilada sanadka cusub waxay la xiriirtaa barafka cad-barafka cad. Oo hadday jid barwaaqaysan ku soo qulqulaan jidadka magaaladaada, ha ka welwelina. Dukumintiyadoodana waad ka iibsan kartid karafka dabiiciga ah!
Waxaan kugula talinaynaa inaad akhrido sida aad si quruxsan u qurxinayso geedka kirismaska.
Run ahaantii, maaha in laga dhigo baraf ka soo baxa ama uu ku ciyaaro barafka, laakiin inuu qurxiyo xafiiska waa ka badan yahay. Waa hagaag, haddii weli jiro baraf daaqada ka baxsan, hadda waxaad awoodi doontaa inaad si toos ah miiskaaga ugu aragto, iyada oo taas oo dhanna ayan dhalaalin doonin oo ka tago calaamadaha qoyan.
Haddii aysan suurtagal ahayn in lagu iibsado barafkaas oo kale, waxaanu kuu soo jeedinaynaa inaad adigu diyaariso. Nidaamku waa mid fudud mana qaadanayo waqti badan ama waxyaabo qaali ah, waxaana lagu siin doonaa niyadda cusub ee sannadka.
Cuntada hore Barafka barafku wuxuu ka kooban yahay seddex waxyaabood oo kala duwan: soodhaha (hal iyo barkad baakad), xumbo xiirto (hal buufin) iyo jajabyo haddii aad rabto in kubadaada duufaankaagu ay iftiimiso iftiinka.
Qaado baaquli, buuxi xumbo, waxay u baahan doontaa dhammaan. Markaas kadib si tartiib ah ku shub soodhaha iyo walaaqaya. Natiijo ahaan, waxaad heleysaa analogooga shimbireed, kaas oo aad xitaa sameyn karto mini-baraf.
Waa muhiim! Waxaad faragelin kartaa xajinta gacmahaaga iyo miyir beelka, laakiin haddii aad leedahay maqaarka xasaasiga ah, isticmaal aaladda ama xirashada gacmo gashi maaddaama soodhuu engegay maqaarka.
Qaybaha quruxda badan ayaa lagu darayaa dhamaadka, waxaad dooran kartaa wax kasta oo hoos ah, sidaa darteed xitaa barafku wuxuu ku habboon yahay mawduuca aad dooratay.
Qaabka labaad Barafku wuxuu faa'iido u leeyahay dhammaan xumbada isku midka ah ee lagu xoqo (midka), iyo sidoo kale galleeyaha ama burka (laba xirmo). Habka diyaarinta waa isku mid, waxaad u baahan tahay kaliya inaad isku darayso maaddooyinka. Kaliya barafkan ayaa horeyba u burburin doona, jilicsan. Halkaas, barafkani waa qabow.
Video: sida loo sameeyo baraf macmal ah
Sidoo kale, waxaa loo samayn karaa jajab, adigoo isticmaalaya jilbaha midabka aad jeceshahay.
Siyaabo kale oo lagu beddelo xaalada xafiiska - si loo doorto nambarada sanadka cusub iyo shaatiinka, kuwaas oo ah maalinta fasaxa ah ee dad badan. Iyada oo ku faraxsan jilayaasha Christmas ee foomka of Maidho iyo Aabbaha Frost, ama qosol leh, geed leh Christmas, Qurxinta Christmas - si aad u dhadhan, noocyada stickers horeba bartamihii December waa weyn.
Gargarada iyo iftiinka
Waxaa laga yaabaa, ma jiro qof aan jeceln in uu eego daaqadaha dukaanka dusha sare leh ee xilliga qaboobaha ama geedka kirismaska ​​leh nalalka midabka leh. Sidaa darteed, ma aha la yaab leh in ay jirto meel liiska ee qurxinta.
Sidoo kale waa mid aad u caan ah in la isticmaalo qurxinta dabiiciga ah. Waxaan ku talineynaa in aan akhrino sida loo qalajiyo liinta iyo liinta qoryaha.
Laakiin ha u maleynin in goobta LEDs kaliya ku quruxda kaynta! Iftiiminta ma aha oo kaliya waxay dejisaa niyadda qolka, gaar ahaan saacadaha fiidkii, laakiin sidoo kale wuxuu noqon karaa qayb ka mid ah quruxda badan ee qurxinta ee style minimalist ah.
Sida loo qurxiyo qol
Markaad go'aansato qalabka loogu talagalay qurxinta golaha, waa wakhti si toos ah loogu socodsiiyo habka qurxinta. Waa inaadan isku dayin inaad isticmaasho wax walba markiiba, miisaanku wuxuu muhiim u yahay meel kasta, sidaas awgeed waa muhiim inaad ka fikirto meesha iyo waxa la dhigo si aan gudaha u noqonin mid xad-dhaaf ah.
Windows - meesha ugu fiican ee loogu talagalay stickers iyo stencils. Calaamadaha casriga ah kama saaraan raadinta dhajinta ee galaaska, iyo sawir-sannadeedka cusub ama xitaa warqad qori ah ayaa ku siin doonta dhoola cadeynin oo keliya adiga, laakiin sidoo kale inaad marayso, haddii aad ka shaqeyso dhulka dabaqyada.
Haddii aadan rabin ama aadan rabin inaad xirto daaqada aragtida leh, ku dhaji faraca dhirta caleenta ah adigoo ku dhejinaya xayiraadda daaqada ama boorsada daaqada. Waxaad isticmaali kartaa labada garqad iyo labadaba. Waxaad sidoo kale ku dhejin kartaa tirooyinka waraaqaha ama geed-geedeedka casriga ah ee ku yaala windowsill.
Ma taqaanaa? Dhaqanka lagu dabaaldegayo xisbiyada sannadka cusub ee Midowga Soofiyeeti wuxuu bilaabay 1935. Waxay ahayd markii ugu horeysay ee sanadka cusub lagu dabaaldego Kharkov Palace ee Pioners. Laba sano ka dib, Santa Claus wuxuu u yimid inuu u hambalyeeyo carruurta horey u qabay Garoonka Garoonka.
Hab wanaagsan iyo hab dhaqameed oo loo qurxiyo albaabka waa in lagu soo xiro cinjir laamo ah ama laamiyo macmal ah. Haddii ubaxu uu u muuqdo mid culus ama aan lagu kalsoonaan karin, ka dibna ku diyaari inaad isticmaasho garland. Waxaa suurtagal ah in lagu xakameeyo albaabka qaabka geed-geedka kirismaska ​​iyagoo gacan ka helaya cajaladaha caadiga ah ee caadiga ah - labadaba iyo labadaba.
Waxaad sidoo kale ku soo lifaaqi kartaa Sanadka Cusub ee Taariikhda Cusub leh ee albaabka leh rabitaan ama sawir calaamadaha Sannadka Cusub, sida geed geedka kirismaska ​​ama Aabbaha Frost oo leh Barafka Barafka. Calaamadda sannadka soo socda waxay u egtahay inay tahay xayawaan gaar ah, kiiskeenuna waa eey.
Cimiladu waxay sidoo kale gacan ka geysan doontaa abuurista niyadda Sannadka Cusub, sidoo kale, walxaha buugaagta ee maaha inay faragelin qofna ma qaadi doonaan meesha bannaan. Sifooyin badan oo ah fasax sannadka cusub ayaa lagu soo lifaaqi karaa, tusaale ahaan, garland balaadhan oo midab leh.
Soo dhaweynta noocaan ah waxaa badanaa la geeyaa xarumaha wax lagu iibiyo, saqafyada qurxinta ee leh ubaxyo jilicsan iyo sawirro sawir leh. Wax walbaa kaa hortaagaya inaad ka shaqeysid xafiiskaaga, gaar ahaan markaad adigu samaysan karto. Isla markaa, waxaad dooran doontaa qiyaasta kubbadaha ku habboon adiga iyo muuqaalkaaga.
Doorasho kale oo asal ah waa geedka hanging. Xaaladdan oo kale, dhirta lafteedu maaha inay iibsato. Laga soo bilaabo isla waraaqaha barafka, shumacyada ama kubadaha, waxaad dhisi kartaa geed miro ah oo geedo ah oo hawada ku jira. Si arrintan loo sameeyo, kaliya waxay u baahan tahay in la saaro dhammaan waxyaabaha ku jira maadooyinka dhererka kala duwan. Qurxintani waxay u muuqataa mid aan caadi ahayn waxayna mar walba noqon doontaa mid muuqata, laakiin ma aha meel bannaan oo miiskaaga ah.
Waa muhiim! Geedkaaga xididdada ah ee jaalaha ah dhig si aan adiga iyo asxaabtuba u dhicin madaxa. Haddii qol leh qaboojiye hooseeya, ka dibna doorta meel bannaan oo aan cidna lugayn.
Haddii ay xaq u leedahay in aad tahay derbi qaawan, oo aad dhabtii doonayso fasax, ama ugu yaraan dareen-kaaga - dhibaato ma jirto. Derbigana waxaa loo qurxin karaa siyaabo badan, waxa ugu muhiimsani maaha in la dhaafo.
Dhirta caadiga ah ama lakab yaryar, taas oo lagu dari karo derbiga oo qurxin, sidaas darteed ku dari kara jawiga xafiisyada urta yar yar ee irbadaha geedaha, waxay ku haboon yihiin. Waxaadna hal meel ama laba laan ku dhigi kartaa oo kaliya, oo ka soo ururi kartaa muuqaal shisheeye oo ah geedka kirismaska. Goob kale oo doorasho ah Goobta kirismaska ​​- garland. Sida daaqada, u soo ururi geedka kirismaska ​​laga bilaabo LEDs oo ku dheji cajalad labajibbaaran si sawirku u eego dheelid dheeraad ah.
Honeycombs iyo taageerayaasha ayaa sidoo kale lagu rakibay derbiyada, si aad u iibsato alaabada diyaar ah iyo iyaga ku soo lifaaq. Waad sameyn kartaa qurxinta gacmahaaga, dhamaantiis waxay ku xiran tahay miisaaniyaddaada iyo helitaanka fikrado xiiso leh.
Waxa kale oo aad kobcin kartaa xaashida adoo leh shaatiinka. Dooro kan ugu habboon ee ku habboon gudaha gudaha xafiiskaaga - taas oo micnaheedu yahay nidaamka midabka guud.
Xaaladda marka qurxinta xafiisyada oo dhan aysan shaqeynin ama la mamnuucay ma ahan kuwo muhiim ah, sababtoo ah waxaa jira hab ka baxsan. Waxaad ku dhejin kartaa dusha sare ee shaqeynta qashin yar oo ka samaysan warqad iyadoo la adeegsanayo farsamada dhirta ama wax kale oo aad jeceshahay. Waxaad si fudud u iibsan kartaa koobi yar oo ah geedo macmal ah. Baraf dabiici ah ayaa kaa caawin doona inaad buuxiso sawirka, laakiin ma seexan miiska oo dhan. Inkastoo maaddadu aysan dhalaalin, waxay xitaa ka hortagi kartaa habka shaqada.
Waxaan u soo bandhignaa ikhtiyaarka kuwa isticmaala kombiyuutarka shaqsi markaad shaqeyneyso. Waxaad abuuri kartaa niyadda farxad leh adoo adeegsanaya shaashadda caadiga ah ee shaashaddaada. Waxyaabaha ugu muhiimsan - ha ilaawin hawsha shaqada.
Iyadoo aan loo eegin sida aad u qurxinaysid goobtaada shaqo, xusuusnow in dabaaldagaleyda aan ahayn kaliya maaha New Year's gardarada ah iyo geedka kirismaska ​​leh baraf. Xaaladda maskaxdu waxay mar walba ku bilaabataa adiga. Qosol, farxad u siiso dadka kale, iyo sifooyinka fasaxa waxa ugu dhakhsaha badan oo noqon doona mid ku soo jiidasho leh oo qurux badan, farxad isha.